Mareykanka oo 7 ruux oo shan ka mid ah yihiin Shiineys ku eedeeyay jabsasho xogta dowladda | Somalia News
Booliska Turkiga oo xabsiga dhgay Ahmed al-Astal & sababta ka dambeysa (Sawirro)
- Advertisement - Booliska Turkey ayaa xiray nin lagu eedeeyey inuu u jaajuusayey Imaaraadka Carabta, sida uu shaaciyey talefishinka dowladda ee TRT World. Ahmed al-Astal, oo ah 45 jir Falastiini ah oo kasoo jeeda Gaza, ayaa haystay baasaboorka dalka Jordan markii loo kaxeeyey xabsi ku yaalla Turkiga. Qoyska Astal ee Gaza ayaa 25-kii September baraha bulshada soo dhigay bayaan ay ku sheegeen in 4 maalmood ka hor xilligaas lagu afduubtay Turkiga. Qoyska Astal waxay sheegeen inuu ahaa suxufi in ka badan 10 sano ka shaqeynayey Imaaraadka Carabta ka hor inta uusan u guurin Turkiga, halkaasi oo uu kula shaqeeyey dhowr warbaahin oo ay ku jirto wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. Bayaan labaad oo ay soo saareen Talaadadii, ayey qosyka Astal waxay Turkiga ku eedeeyeen inay si aan wanaagsaneyn ula tacaaleen arrintan. Qoyska ayaa ku booriyey madaxweynaha Falastiin Mahmud Abbas inuu soo faro-geliyo arrintan, ayaga oo sheegay in xaaskiisa iyo laba gabdhood oo uu dhalay ay kaligood ku yihiin Turkiga. Talefishinka TRT World ayaa ilo-wareedyo Turkish ah kasoo xigtay in Astal uu Imaaraadka Carabta u jaajuusayey ururka Ikhwanul Muslimiin ee Turkiga, sidoo kalena uu waday dhaq-dhaqaaqyo kale tan iyo markii uu dalka usoo guuray 2013. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay inuu ururinayey macluumaadka arrimaha gudaha Turkiga. Xigasho: VOA+AFP Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement -
Mareykanka oo 7 ruux oo shan ka mid ah yihiin Shiineys ku eedeeyay jabsasho xogta dowladda
Dowladda Mareykanka ayaa 7 ruux oo shan ay u dhalatay dalka Shiinaha, labana dalka Maleysia ku eedeysay in ay u dhaceen islamarkaana ay jabsadeen xogta hay`ado dowladda ah, shirkado iyo ururro Mareykanka ka diiwaan gashan.
Ku-xigeenka wasiirka caddaaladda Jeffrey Rosen oo shir jaraa`id qabtay ayaa sheegay in todobadan ruux ay dhanka internetka ka weerareen in ka badan 100 shirkadooda oo daafaha caalamka ku kala yaal, iyagoona shanta eedeysane ee Shiineyska ah uu sheegay in ay u shaqeeyaan dowladda Shiinaha.
Jeffrey Rosen ayaa ku eedeeyay ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay hoy siiso burcadda internetka.
Wasiir xigeenka ayaa sheegay in shanta shiineyska ah ay maxsad yihiin, halka labada Maleysia kasoo jeeda la qabtay Isniintii.
Weerarka raggan ee dhanta internetka ayaa socday muddo 6 sannadood ah, sida uu sheeciyay Jeffrey Rosen .
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo aamini waayay Mahdi Guuleed Sirdoona daba dhigay !! (Daawo Sawirro)
Next articleMacalimiin dusgi qur’aan ah oo lagu laayay degmada Cadale